‘न्याय माग्न जाँदा ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ अभियान चलाउने मुख्यमन्त्रीले बच्चा फाल्न भने’ – Dcnepal
‘न्याय माग्न जाँदा ‘बेटी बचाउ बेटी पढाउ’ अभियान चलाउने मुख्यमन्त्रीले बच्चा फाल्न भने’
प्रकाशित : २०७७ मंसिर २४ गते ११:४६
काठमाडौं। धनुषाकी निहारीका सिंह उमेरले २० वर्षकी मात्र भइन्। बाबुआमाको कमाइमा सुख खोज्ने बेला काखमा ३ महिनाको छोरा बोकेकी छन्। आमाबुवाले उनलाई तिरस्कार गरेर घरबाट निकाले पनि उनी आमा बन्न पाएकोमा गर्व गर्छिन्।
काखमा भएको बच्चाको मुख हेर्दै आखाँमा खुसीको आँशु निकाल्छिन् र भन्छिन्, ‘मलाई आमा बन्ने सौभाग्य दियौ। तिम्रो के दोष थियो र तिमीलाई मैले गर्भमै मार्नु? त्यसैले मैले दुनियाँ छोडेकी छु।’
डिसी नेपालमा न्याय माग्दै आइपुगेकी निहारीकाले गत भदौ ५ गते तीजका दिन छोरालाई जन्म दिइन्। उनले त्यस पहिलाका ९ महिना रोएरै बिताइन्। कहिलै कसैको त कहिले कसैको ढोकामा पुगिन्, न्याय माग्न। धनुषामा रहेका स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रहरी, महिला अधिकारकर्मी, संघसंस्था तथा प्रदेश नं. २ को प्रदेश प्रमुखकोसम्म ढोका ढक्ढक्याइन् तर, सबैले उनको गर्भमा रहेको बच्चा फाल्ने सुझाव दिए।
‘धनुषामा मेरो गर्भमा रहेको बच्चा फाल्ने सल्लाह दिए सबैले,’ उनले भनिन्, ‘मैले जीवनमा आमा बन्ने अवसर पाएकी थिएँ, किन फाल्नु बच्चा। म जसरी पनि आमा बन्छु भन्ने अठोट गरेँ।’ उनीमा आत्मविश्वास कायम नै थियो। उनी आफू आमा बनेकोमा गर्व गर्छिन र स्वीकार गर्छिन।
‘मैले त पुरै विश्वास गरेको थिएँ,’ अहिले पनि निहारीकाको विश्वास डगमगाएको छैन। उनीहरुबीच सातै जुनी सँगै जिउने मर्ने बाचा हुन्छ। निहारीकाले आफ्ना आमा बुवालाई थाहै नदिइ उनीसँग विवाह गर्ने निधो गर्छिन्। श्रेष्ठले पनि उनलाई आफ्नो घर लैजाने, घरमा बस्ने र निहारीकासँगै विवाह गर्ने कुरा गर्छन्।
तर, हरेक दिन उनले मलाई पेटको बच्चा फाल्नु पर्छ भन्ने दवाब दिन थाले,’ निहारीकाको सपना बालुवाको घर भयो। क्षणभरमा उनको सपना खरानी भयो। आफ्नो प्रेमीको घरलाई आफ्नो घर भनेर बस्ने उनको भाग्यमा अब श्रेष्ठले शब्दबज्र प्राहार गर्न थाले। श्रेष्ठको शब्द सापटी लिदैँ निहारीकाले भनिन्, ‘कसको पेट बोकीस् मलाई के था?’
निहारीकाको पेटमा भएको बच्चा मार्न चाहन्थे उनीहरु। ‘दुई दिनसम्म खाना पानी पनि दिएनन्,’ निहारीकाले त्यो दिन सम्झिइन्, ‘आमा र ठूलीआमा भएर पेटमा लात्ती हान्न थाल्नु भयो। उहाँहरु मेरो पेटमा भएको बच्चालाई मार्न चाहनु हुथ्यो। मलाई पनि गर्भपतन गराउ अनि हामी स्वीकार्छौं भन्न थाल्नु भयो। तर, मैले मेरो बच्चा मार्ने आटँ गरिन। यसको के दोष, यसलाई किन मार्नु झै लाग्यो।’
अब लडाईका लागि उनी न्यायमूर्तिका ढोकाहरुमा धाउन थालिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पुगिन्। त्यहाँको महिला सेलका सईले उनलाई नै दोषी सावित गर्ने कोशिस गरिन्। ‘महिला सेलको सईले तिमी नै त्यस्तै हौ भन्नु भयो। मलाई भोलि डिएनए चेक हुन्छ पनि भन्नु भयो। र, गर्भ पतन गराउने सल्लाह दिनु भयो।’ डिएनए चेकजाँच भए पनि डर छैन निहारीकालाई। ‘जुनसुकै चेकजाँच गराए पनि हुन्छ।’
‘दुई पटकसम्म म बस्ने घरको सिँढीमा लडेको थिएँ। दुई तला माथिबाट मुनिसम्म पुगेँ। म अस्पताल गएँ। मलाई त हल्का चोटपटक लागेको थियो तर, पेटमा बच्चालाई केही भएको पाइएन। म खुसी भएँ।’ आफूमा आएको आत्महत्याकाको सोच मनैबाट निकालिन निहारीकाले। जब उनी दोश्रोपटक सिँढीमा लडेर बच्चा सुरक्षित भएको खबर पाइन्। उनी अहिले पनि त्यो दिनलाई सम्झिन्छन्।
‘यो बाबुलाई यो धर्तीमा आउनु थियो। म दुई पटकसम्म लड्दा पनि केही भएन। आमाले यो पेटमै मरोस् भनेर पेटमा लात्ति बझार्दा पनि केही नभएपछि उसले जन्मलिनुमा केही अर्थ छ झैं लाग्यो र जसरी पनि जन्म दिनुपर्छ भन्ने मेरो आत्म विश्वासमा बढ्वा मिल्यो।’ न्याय नपाएपछि काठमाडौं निहारीकाले धनुषामा रहेका सम्पूर्ण सम्भावित ठाउँ चाहारिन्।
दुई नम्बर प्रदेश सरकारको नारा नै छ, ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’। निहारीकाले यो नारा नारामामात्र सीमित भएको जिकिर गरिन्। उनले भनिन्, ‘म मुख्यमन्त्रीकोमा पनि पुगेकी थिएँ। उहाँले पनि लाउलाउ, खाउँखाउँ भन्ने उमेरमा के यस्तो गरेको। त्यो पेटको बच्चा फालेर आफ्नो जीवनलाई नविकरण गर। यो त तिम्रो कमजोरीको कारण हो भन्नु भयो। आफूले मोबाइल चलाएर बस्नु भयो मलाई कुनै रेस्पोन्स नै गर्नु भएन।’ निहारीका सबैखाले न्यायका मूर्ति मानिएकाहरुसँग ढोग्न छोडिन्।
उनी सम्झन्छन्, ‘अरुले भने झै मैले पेटको बच्चा फालेँ भने पनि म बद्नामी त भइसकेँ। मैले आफ्नो शरीर र आफ्नो गुमेको प्रतिष्ठालाई फिर्ता ल्याउन त सक्दैन। मैले अरु कसैसँग विहे गरेभने पनि के ग्यारेन्टि छ उसले मलाई हिंसा गर्दैन भन्ने यी सबै कुरा सम्झेर बरु आमा बनेर न्याय लड्छु भन्ने सोचेँ।’